Ụnyaahụ, anyị hụrụ ọkwa mgbasa ozi banyere ikpe Anne Faber, nke "nna Anne" kwuru. N'ezie, ọ bụ arụmụka nke eritere ọmịiko maka mkpochapụrụ ọtụtụ ikike dịka o kwere mee site n'onye jọgburu onwe ya dị ka Michael P. "Nna Anne" dị oke iwe na ya [...]
gbara akwụkwọ ANNE FABER, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 28 March 2019	• 18 Comments
N'ọtụtụ isiokwu m kọwara ihe kpatara ikpe Anne Faber, nke Michael P. bụ onye na-eme ihe, dị ka ọ bụ PsyOp (ọrụ uche). Ọrụ iji megharịa iwu. Taa, enweghi oke ohia a. Ngosipụta nke isi okwu Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta na njiri elu. Ị mepụtara [...]
gbara akwụkwọ ANNE FABER, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 July 2018	• 2 Comments
Ọ bụ ezie na ọtụtụ achọghị ka nnukwu okwu dịka nke Anne Faber na Michael P. nwere ike ịbụ ọrụ uche (psyop) - iji mee ihe ọhụrụ - ihe kpatara amụma a dị ka ọ fọrọ nke nta ozugbo mgbe ikpe ahụ gasịrị. M [...]
Gịnị ka Michael P. na ọrụ Anne Faber nwere jikọrọ ya na iko ụwa? Nweta 1 nde!
gbara akwụkwọ ANNE FABER, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 15 June 2018	• 6 Comments
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ ihe dị oke mmetụta na-aga n'emeghị ya, ọ dị mma mgbe nile ime nke a maka nnukwu ihe omume. Ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike na ihe ahụ merenụ, ma na-ele ihe na-agafe, mana ike iche echiche siri ike ezuola ma ọ bụ bụrụ nke ike gwụrụ. Ị wee jide ha nkwubi okwu [...]
gbara akwụkwọ ANNE FABER	by Martin Vrijland	na 12 June 2018	• 15 Comments
Ò nwetụla mgbe ị nwetara ikpe, bụ nke onye na-eme ihe a na-ekwu na ọ bụ nanị ma bụrụ onye a mara ikpe na-adabere na nkwupụta? O doro anya na anyị niile ga-ekweta na Michael P. bụ onye na-egbu egbu na onye na-egbu ọchụ nakwa na onye ezi uche dị na ya bụ Anne Faber na-agba ịnyịnya ígwè na-adịghị ọcha na mgbede mgbe ihu igwe na-adịghị mma [...]
N'ihi gịnị ka Anne Faber ji mee ka onye ọkwọ ụgbọala nke Michael P. na-eduzi ọkpụkpụ Soesterberg?
gbara akwụkwọ ANNE FABER	by Martin Vrijland	na 12 June 2018	• 24 Comments
Akụkọ banyere ikpe na-ahụ maka njide n'ike na igbu ọchụ nke Anne Faber na-egosi n'ụzọ doro anya na Michael P. (Panhuis) ga-amanye Anne ka ọ nọrọ n'oche ya. (Gụgharịa mgbanwe a / nhazi nke akụkọ ahụ). N'ebe a, ọ ga-etinye ya okpu agha na aka ya na tiewrap ọnụ [...]
Ụfọdụ akwụkwọ ndị a ma ama na ikpe (Michael) na Michael P. gbasara ihe gbasara Anne Faber
gbara akwụkwọ ANNE FABER	by Martin Vrijland	na 11 June 2018	• 16 Comments
O siri ike ka ị ghara ịnọ n'ihu ikpe ugbu a, n'ihi ya, ana m ejikọta ozi ndị dị na Saskia Belleman van de Telegraaf. Nyere na m na-anọ ná mba ọzọ na enweghị ike ịna-akwụ ụgwọ maka njem ahụ, nke ahụ bụ nanị ụzọ. Ma naanị [...]
Anne Faber n'ihu page Telegraaf, ebe enyi Nathan Fidder na ndị bụ ndị enyi a kpọtụrụ aha?
gbara akwụkwọ ANNE FABER	by Martin Vrijland	na 2 June 2018	• 17 Comments
Ọ bụ akụkọ pụtara ìhè banyere Anne Faber bụ onye yiri ka ọ na-agbahapụ taa, na-ebuso echiche ahụ n'ụzọ doro anya na ihe niile nwere ike ịdabere na uche. Mana onye ọ bụla gụrụ isiokwu site na Telegraaf nke taa, ga-ahụ ihe ole na ole. Enweghị aha banyere [...]
gbara akwụkwọ ANNE FABER, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 27 Ka 2018	• 9 Comments
Anyị nwere ike itinye ya na akwụkwọ nta akụkọ, ma na nnukwu ikpe dịka ikpe Anne Faber, ọ dị m ka ị nweghị ike ịmegharị olili ozu na oku. Ugbu a, anyị nwere ike ikwu na Telegraaf na-emehie ọtụtụ mgbe, ma na ihe onye na-efu efu dịka Anne Faber M chere na ọ bụ ihe zuru ezu [...]
Michael P. ama ọkwa ọkwa nke ọnwụ nke Anne Faber: ozi ọma ma ọ bụ eziokwu?
gbara akwụkwọ ANNE FABER	by Martin Vrijland	na 11 January 2018	• 24 Comments
Ụnyaahụ mgbasa ozi kọrọ na Michael P. (bụ onye ugbu a onye ọ bụla maara na P na-anọchite anya Panhuis) gaara ekwupụta ọkwa nke igbu Anne Faber. Nke a nwere ike na mberede na oge pro forma session. Na nke a esiteghi na mbu, adighi adaba na oghere nke oghere [...]
Nleta nile: 1.502.395
Nje na-agba mbọ ibugasị ahụ niile na izu ohi ozi sel
Vidiyo cenyere David Icke London: ọ bụ Icke maka ezigbo ka ọ bụ nke adịgboroja ka ọ bụ eziokwu gwakọtara na ọnyà booby?
Nsogbu Corona: O nwere ike were afọ 2 ruo atọ tupu ị nwee ike pụọ na mkpọchi, belụsọ na ntinye ngwa na ngwa
Martin Vrijland op Vidiyo cenyere David Icke London: ọ bụ Icke maka ezigbo ka ọ bụ nke adịgboroja ka ọ bụ eziokwu gwakọtara na ọnyà booby?
Marianne op Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị gbara gị gburugburu ji kpuo ìsì?
Ntinye op Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị gbara gị gburugburu ji kpuo ìsì?
Rose op Nje na-agba mbọ ibugasị ahụ niile na izu ohi ozi sel
Martin Vrijland op Nje na-agba mbọ ibugasị ahụ niile na izu ohi ozi sel